Inona No Tadiavinao? Fiantsoana Hitokona Eo Amin’ny Sukiya, Tambajotra Japoney Mpamatsy Sakafo Vita Haingana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2014 16:29 GMT
Dikasarin'ny lahatsary nalefan'ny LaborNet Japan ao amin'ny YouTube.
Ao anatin'ny hetsi-panoherana faobe itakiana ny tokony hanomezana karama ara-drariny ary hanatsaràna bebe kokoa ny fepetra iasàna ho an'ireo mpiasa amin'ny mpamatsy sakafo vita haingana, nisy tatitra tsy voamarina tao amin'ny Twitter nilaza fa nitokona ireo mpiasa ao amin'ny Sukiya, tambajotra Japoney mpamatsy sakafo vita haingana .
Sukiya, tambajotra-na toeram-pisakafoanana Japoney, tantanan'i “Zensho Holdings”, malaza amin'ny vidin'entany mora, ny “gyūdon” na ny vary sy hena omby matsiro. “Mitahiriza vola sy fotoana”, izany no tsangan-kevitr'ilay orinasa. Voapentin'ny filazana ny faharatsian'ny fepetran'ny asa izany, noho ny ” fampiasany olona tokana ihany amin'ny asa “, ary ny fikatonan'ny toeram-pivarotana miisa 28 noho ny antony tsy fahampian'ny mpiasa. Nokianin'ilay orinasa ny tatitra vao haingana nataon'ny haino aman-jery, izay nilaza fa maro ireo toeram-pivarotany nikatona. Avy tamin'ny vohikalan’ i Zensho [ja]:
Nisy tatitra sasantsasany nataon'ny haino aman-jery izay nitondra ny lohateny hoe “toeram-pivarotana miisa 184 nikatona noho ny antony tsy fahampian'ny mpiasa”. Kanefa, nikatona noho ireto antony ireto ireo toeram-pisakafoanana miisa 184 ireo: 156 noho ny fanamboarana atao amin'ilay fivarotana [fitaovana ao an-dakozia], ary 28 ihany no nikatona noho ny antony tsy fahampian'ny mpiasa.”
Nitokona ny mpiasa tamin'ny toeram-pivarotana Sukiya sasany, tamin'ny 29 May 2014 teo, raha araka ireo tatitra tsy voamarina [ja] tao amin'ny aterineto. Mety hanondro ny hoe “hena” ny fomba fanonon'ny Japoney ny isa 29. Nampiasain'ireo mpiasa tapak'andro sy ireo mpikatroka mafàna fo ny tenifototra #すき家ストライキ (#fitokonana ao amin'ny Sukiya) amin'ity “andron'ny hena” ity, mba hanaovana hetsika hanoherana ny Sukiya.
@Artanejp, mpampiasa Twitter, nandefa sary maneho soratra naraikitra teo an-tampon'ny varavaran'ny toeram-pivarotana iray mivaky toy izao, “Mikatona izahay manomboka amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 10 ora maraina noho ny tsy fahampiasan'ny hery mpamokatra.” Nifampizaràna be tety amin'ny aterineto io sary io, ary vao maika niparitaka be ilay tenifototra. Na dia ny gazety an-tsoratra tsotra toy ny “Asahi Shimbun” aza mba nifantoka tamin'io resaka io [ja] koa , ary nangataka ireo mpampiasa aterineto mba hanome loharanom-baovao.
Ohatra ny hoe tena mitokona marina izy ireo. Hajaina tanteraka. @Artanejp: Toa tsy misy mivarotra daholo ireo toeram-pivarotana Sukiya rehetra ao amin'ny faritr'i Tsuchiura [Prefektioran'i Ibaraki] LOL #StrikeonSukiya
Kanefa, misy ireo mpampiasa aterineto sasany mitatitra fa mahita fivarotana miasa toy ny andavan'andro, noho izany, tsy mazava tsara raha noho ny antony fitokonana tokoa no niavian'ilay sary miely amin'ny aterineto.
Tapa-bolana lasa izay, nanao fihetsiketsehana mitovitovy amin'izany antony izany ireo mpiasan'ny mpamatsy sakafo vita haingana. Nandefa lahatsary momba ny fihetsiketsehana tao Tokyo mifandraika amin'ny hetsika maneran-tany ho an'ireo mpiasan'ny mpamatsy sakafo vita haingana ny Labornet Japan, tambajotra ikambanan'ireo mpikatroka mafàna fo miaro ny zon'ireo mpiasa, . Manoratra toy izao ny Labornet:
Tamin'ny 15 May 2014, nisy hetsika niaraka maneran-tany, nataonà firenena dimy amby telopolo , nitakiana ny fanajàna ny zon'ireo mpiasan'ny mpamatsy sakafo vita haingana, ary mba hanomezana azy ireo karama mifandraika amin'ny asany. Tao Japana, ny Sendikan'ny Tanora Mpiasa ao Tokyo no nikarakara ny hetsika, ary nandeha an-tongotra tamin'ny làlana malaza tao amin'ny distrikan'i Shibuya, ao afovoan'i Tokyo ireo mpandray anjara. Nilaza izy ireo hoe “Tsy mila ora ambony ampanga izahay, ary afaka mankafy sakafo hariva na fifamotoanana amin'ny vidiny 1.500 yen ny ora iray”. Nahazoana akony tsara avy any amin'ireo olona mpiasa ao amin'ny distrika ilay hetsika. Nilaza tamiko ny karamany isan'ora izy ireo, “950 yen”, “1.100 yen” ary “1.200 yen” [izay eo ho eo amin'ny manodidina ny 9.3 USD, 10.8USD, 11.8USD eo avy], izay mbola ambany daholo ihany. Teo anoloan'ny toeram-pivarotana hena omby Sukiya sy McDonald’s iray, nitaky karama ara-drariny, 1.500 Yen isan'ora raha kely indrindra ireo mpanao fihetsiketsehana, nampiseho takelaka nisy soratra tamin'ny teny Japoney, Anglisy ary Espaniola. Maro ireo haino aman-jery nitatitra io hetsika io.
Tamin'ny voalohandohan'ny volana May, nilaza [ja] ny Zensho Holdings fa namorona kaomity iraisan'ny telo tonta hanatsara ireo fepetranny asa. Niantso hanao fitokonana [ja] momba ireo zavatra takiany ny Sendikan'ny mpiasa ao amin'ny prefektioran'i Chiba. Ny Sendikan'ireo mpiasa amin'ny ampaham-potoana ao amin'ny Zensho dia nanameloka ilay fitokonana [ja] ho tsy ara-dalàna ary nanentana ireo mpiasa amin'ny ampaham-potoana ireo mba tsy handray anjara.
Miaraka amin'ny fahitàna ilay tenifototra sy ny resaka mandeha manodidina ireo tatitra tsy voamarina ao amin'ny aterineto, hita fa toa lasa goavana noho ny tena izy ireo fitokonana sy ny laza ratsin'ny Sukiya.
Nandeha tao amin'ny iray amin'ireo Sukiya manakaiky an'i Minato, tanànan'i Tokyo aho, ny tolakandron’ ny 29 May. Nisokatra io.
[Fanitsiana] “fahaverezana” navadika ho “tsy fahampiana” ao amin'ny fandikàna teny.
10 ora izayHong Kong (Shina)